यूसुफ दाजुहरूको परीक्षा गर्छन्: प्रथम परीक्षा – Word of Truth, Nepal
“उनी छैनन्” भनी भन्दै थिए (४२:१३), ठिक त्यही व्यक्तिसँगै आफूहरूले बातचीत गरिरहेका छौं भनी एक छेउ पनि तिनीहरूले शंका गरेका थिएनन्।
यूसुफले आफ्‍ना दाजुहरूलाई राम्ररी चिन्थे। मार्ने मतो गरेका ती दुष्टहरूले उनलाई आखिरमा दासत्वका निम्ति बेचेका थिए। यी मानिसहरूलाई आफ्‍नो इच्छाअनुसार जे पनि गर्नालाई यूसुफसोग सारा अधिकार थियो। यस्तो परिस्थितिमा एउटा मानिसको स्वभाविक प्रतिक्रिया प्रायः कस्तो हुन्छ? बदला लिने? साटो फेर्ने? खराबीको बदला खराबी गर्ने? “तिनीहरूले मलाई जस्तो गरेका थिए, म पनि त्यस्तै गर्छु”? के यूसुफले त्यसरी व्यवहार गरे?
जब यूसुफले आफ्‍ना दाजुहरूलाई जासुसी गर्न आएको आरोप लगाए, तब तिनीहरूले तुरून्त जवाफ दिए, “होइन, हे प्रभु . . . हामी __________________ मानिसहरू हौं” (४२:९-११)। हामी झूटा कुरा गर्दैनौं, हामी दस-भाइ इमान्दार मानिसहरू हौं भनी तिनीहरूले जवाफ दिए। तर यूसुफको बारेमा आफ्‍ना बाबुबाट तथ्य कुरा लुकाइराखेका हुनाले तिनीहरू बास्तवमा इमान्दार थिएनन् (३७:३१-३३)। यूसुफले अब तिनीहरूको एउटा जाँच गर्छन् − अर्थात् तिनीहरूलाई आफ्‍नो इमान्दारिता प्रमाणित गर्ने मौका दिन्छन् (४२:१४-२०)। के तिनीहरू जाँचमा सफल होलान्?
तिनीहरू जब मिस्रमा आइपुगे, ती दसजना दाजुभाइहरूमाथि एकपछि अर्को समस्या आइपर्‍यो। तिनीहरूलाई आरोप लगाइयो (४२:९,१२,१४), परीक्षा गरियो (४२:१५-१६) अनि कैदखानामा हालियो (४२:१७,१९)। यी सब तिनीहरूमाथि किन आइपर्‍यो? के तिनीहरू निर्दोष र इमान्दार मानिसहरू थिए? के तिनीहरू यस्ता संकष्टहरू भोग्‍नका योग्य थिए? आफ्‍ना हृदयहरूमा तिनीहरू राम्ररी जान्दथे, आफूहरूले पाउनु पर्ने नै दुःख तिनीहरूले पाइरहेका थिए। करीब बीस वर्षको लामो अन्तरालपछि मात्र (यूसुफ अब कम्तीमा ३७ वर्ष पुगेका थिए), तिनीहरूले आफ्‍नो दोषलाई स्वीकार गरे, “हाम्रो भाइको विषयमा हामी साँच्चै __________ छौं।” (४२:२१)। शयद अहिलेसम्म तिनीहरूले आफूहरूले गरेको पापको परिणामबाट हामी उम्क्यौं भनी सोचेका थिए होलान्; तर हाय, सानो भाइ खाडलमा हुँदाको त्यो दिनलाई सम्झँदा यूसुफको चित्कारहरूले तिनीहरूको हृदयहरूलाई घोँच्न थाल्योः “उसले हामीलाई टुटी-टुटी विन्ती गर्दा हामीले उसको प्राणको व्यथा देख्यौं, तर हामीले सुनिदिएनौं; यसैकारण यो ______________ हामीमाथि आएको छ” (४२:२१)। “हामीले उनलाई व्याकुल गरायौं, अब हामी आफै व्याकुल भएका छौं।! यूसुफलाई गरेको दुर्व्यवहारअनुसारकै फल अब हामीले भोगिरहेका छौं!”
आफ्‍ना बोराहरूभित्र आफैले तिरेका पैसा फेला पर्दा ती दाजुहरू झनै व्याकुल बने। फेरि पनि आफ्‍नै विवेकहरूद्वारा तिनीहरू दोषी ठहरिएको र परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो जघन्य अपराधको बदला दिइरहनुभएको महसुस गरेः “__________________ले हामीसि गर्नुभएको यो के कुरा हो?” (४२:२८)। अर्को पटक मिस्रमा फर्केर जानुपर्दा त्यहाँका अधिपतिले तिनीहरूको विरुद्धमा बोल्नलाई मौका पाउने भए। यी “इमान्दार मानिसहरू”लाई चोरको आरोप आइपर्ने भयो! यी सब कुराहरू सुन्नुपर्दा याकूबले पनि सहन सकेनन (४२:२९-३८)। छोराहरूको खबरअनुसारका अप्रिय देखिने घटनाक्रममा परमेश्वरको योजना उनले पनि देख्न सकेनन्।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 19:49:142020-04-28 14:16:52यूसुफ दाजुहरूको परीक्षा गर्छन्: प्रथम परीक्षा
यूसुफ तथा फाराओका कैदीहरूयूसुफ आफूलाई दाजुहरू समक्ष प्रकट...